Madaxweynaha Somaliland iyo Wasiiro kamid ah Xukuumadiisa oo imaaraadka u duulay.. | Mudug 24 Online
Madaxweynaha Somaliland iyo Wasiiro kamid ah Xukuumadiisa oo imaaraadka u duulay..
Madaxweyne Biixi, oo aan saxaafadda la hadal markii uu dhoofiyay, ayaa waxa safarkaasi ku wehelinayay shan wasiir oo kala ah, wasiirrada arrimaha dibedda, Qorshaynta, Ciyaaraha, Arrimaha Dastuurka iyo Biyaha; iyo sidoo kale, guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, Eng. Faysal Cali Waraabe.
Safarka madaxweyne Biixi ayaa ku soo beegmay xilli ay mudanayaasha labada baarlamaan ee Federaalka ah iyo kan Somaliland ay siyaabo kala duwan uga hadleen heshiis saddex geesood ah oo dhexmaray Somaliland, Itoobiya iyo Shirkadda DP World.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay heshiiskaas mid aan jirin, halka golaha wakiillada ee Somaliland isna ku tilmaamay heshiiskaas mid sharci ah oo aan khusaynin baarlamaanka Soomaaliya.